Sina AUMAN EST DUMPER orinasa sy mpanamboatra | Foton
Fahombiazan'ny fitaterana ambony sy fahaizana mitondra ambony
Fomban'ny Drive 6 * 4 8 * 4
Hafainganana farany ambony 85/95 km / h
Miaraka amin'ny filan'ny injeniera, ny kamiao Auman EST dia namboarin'ireo manam-pahaizana manokana momba an'i Benz ary namboarina sy namboarina mifanaraka amin'ny fenitra eropeana mba hahatsapa breakthourghs lehibe amin'ny lafiny azo itokisana, fahombiazan'ny herinaratra, fitsitsiana solika, soa aman-tsara, fampiononana ary mitondra fanandramana sanda amin'ny fahombiazan'ny fitaterana avo kokoa sy ny fahafaha-mitondra ambony ho an'ny mpanjifa.
Ny kamio dia ampandehanin'ny motera ISG vaovao vaovao an'ny Cummins izay misy ny famoahana tora-pasika avo lenta sy ny grady mahery vaika; ny rafitry ny herinaratra dia nohatsaraina sy nopetahan'ny teknolojia Benz hanomezana tselatra avo lenta ary hahatsapa ny fahombiazan'ny fampitana ambony.
Tsindrona faneriterena avo lenta mihoatra ny 2000bar
Maotera 12L famindran-toerana lehibe
2,300NM famoahana torela farany ambony
Fiarovana amin'ny frezy
Ny rafitry ny motera iBrake dia mahatratra 370ps ny tanjaky ny freins avoakan'ny kiraro nohamafisiny: ny kiraron'ny frezy malalaka indrindra an'ny orinasa dia manapaka ny halaviran'ny freins hatramin'ny 20%.
Ny cab dia mandray ny vatan'ny rafitry ny rafitra mifono vy miaraka amin'ny ravina vy matevina 1mm amin'ny alàlan'ny robot avo lenta ary nandalo ny fitsapana fifandonana teo anoloana sy teo anilany, ny fitsapana ny tanjaka tamin'ny tafo, ary ny fitsapana fifandonana teo aloha.
Fiarovana amin'ny rafitra jiro
Ny rafi-jiro avo indrindra amin'ny alina, ao anatin'izany ny jiro dabilio, jiro fitoeran'entana, ary jiro amin'ny alina amin'ny takelaka farany, dia miantoka ny fiarovana amin'ny asan'ny alina.
Fiarovana amin'ny fiarovana
Ny fitaovana familiana varingarina lehibe 130mm dia ampiharina ary ny paompom-booster steering dia tsy namboarina mba hiantohana ny familiana mora sy malefaka ary fiarovana azo antoka kokoa.
Ny firafitry ny rafitra nohavaozina amin'ny endrika U-karazana dia afaka mahafeno ny filan'ny tanjaka sy hampihena ny lanjany.
Ny firafitra super dia vita amin'ny ravina vy mahery miaraka amin'ny tanjaka ≥800MPa ary ny hamafin'ny ≥300HB Brinell hanatsara ny fanoherana ny fitafy sy ny fanoherana ny harafesina ary hanitatra tanteraka ny fiainana.
Ny rafitra U-karazana miaraka amina modeling streamline tsara dia ampiharina mba hahatsapany fanariana fitaovana malemilemy kokoa, tsy misy fitaovana arahana, ary hamahana ny olan'ny fanariana miadana mandritra ny fitaterana fitaovana misy hafanam-po avo.